Shacabka Reer Garbahaaray Iyo Ciidamada Itoobiiya Oo Maanta Gacanta Is Kula Tageen – STAR FM SOMALIA
Ka dib xiisad muddo saacadaha ka taagneyd Magaalada Garbahaarey Ee Gobolka Gedo, ayaa waxay ku soo idlaatay in gacanta loola taggo Ciidanka Militariga Itoobiya.
Militariga Itoobiya, ayaa saakay isku gadaamay hoyga Maxamed Cabdi Kaliil, ka gadaal markii ay ka war helayn in xalay uu soo galay Xarunta Gobolka Gedo Ee Magaalada Garbahaarey.
Ganacsatada oo albaabada u laabay goobahooda ganacsi iyo shacabka reer Garbahaarey, ayaa soo buuxiyay hoyga Maxamed Cabdi Kaliil, waxa kaloo ay shacabku xireen wadooyinka Magaalada qaarkood.
Shacabka oo dhegxaan soo gurtay, ayaa shiid kala daalay Ciidanka Itoobiya, waxa kaloo jira askari Itoobiyan ah oo gaari booyad ah ilaalo ka haayay in qorigii uu watay xoog looga fara maroojiyay.
Ciidanka Itoobiya, ayaa dib kaga gurtay hoyga Maxamed Cabdi Kaliil, iyagoona dib ugu laabtay Xeradii ay saakay ka soo ruqaansadeen, mana jirin wax rasaas ah oo ay Ciidamada Itoobiya adeegsadeen.
Shacabka reer Garbaharey oo markii horeba si weyn kaga soo horjeeday in shaqada laga eryo Maxamed Cabdi Kaliil, ayaa muujiyay sida ay u garab jooggaan Gudoomiyaha.
Dadka reer Garbahaarey, ayaa ku qaylinaayay in dhulkan uu yahay midkii Somaliyeed, isla-markaana aynaan marnaba aqbali karin gumeysi cusub.
Waxaa soo baxaaya warar sheegaaya in Ciidanka Itoobiya ay codsadeen dib in loogu soo celiyo laba qori, oo ay shacabku ka furteen, balse waxaa la ogyahay in shacabka ay hal qori oo keliya ka qaateen askari ilaalo u ahaa gaari booyad ah, oo Ciidanka Itoobiya ay lee yihiin.